Dzimwe nzira dzekugadzira barbeu yemiriwo | Bezzia
Pau Heidemeyer | 03/05/2021 16:00 | Nutrition, Utano
Mamiriro ekunze akanaka anotanga isu tinotsvaga chero vhiki yevhiki kuti tiwane bhengi uye tinakirwe neimwe nyama yakanaka. Pane kudaro, kune anotevera kudya kwakashata kwemuriwo, zvinogona kutaridza kuti havasi kuzonakidzwa zvakanyanya sevaya vanodya nyama.
Izvi hazvisi zvechokwadi zvachose, nekuti bhengi inogona kutambira zvinodiwa nevasina kudya, uye wozongonakidzwa. Kana iwe uchida kuziva dzimwe nzira dzakanakisa, Tichakuudza ipapo.
Kuva munhu wezvinomera kuve nehupenyu hwakasiyana, uye ndozvowo vanogona kunakirwa nemabharuki nenzira inoenderana nesarudzo dzekudya kwavo.
Idzo sarudzo dzinogona kufambiswa pakati ndeye echinyakare miriwo skewers, vegan burgers ane howa, legume burger kana yakakangwa miriwo nemiriwo michero. Bhengi rezvinomera rinogara riine hutano sekureba iwe uine mupfungwa izvo zvaunofamba nazvo nazvosezvo mwaka misi inogona kungo "shata" seiya inoshandiswa nenyama.
Kana iwe uchida kuziva zvimwe sarudzo kuti uite barbecue yemiriwoIsu tinokuudza pazasi kuitira kuti uve nezvimwe sarudzo mupfungwa, kuti pamwe iwe hauna kumbobvira wawira mazviri.
1 Yakanakisa dzimwe nzira dzebibiji yemidziyo
1.1 Muriwo skewers
1.2 Seitan mafillets
1.3 Miti yakasungwa
1.4 Veggie burgers
1.5 Chibage chakakangwa
1.6 Warm saradhi
1.7 Yogurt kupfeka
2 Usatarisira pasi ma veggies pane bhengi
Yakanakisa dzimwe nzira dzebibiji yemidziyo
Kune mikana yakawanda yekugona kuronga barbecue yemiriwo. Uye zvakare, iwe uchawana sarudzo dzakanakisa dzinokutendera iwe kunakirwa gastronomy nezvimwe zvinhu.
Iwo skewer anokwanisa kugadzirwa chete nemiriwo, aya akaisirwawo kunhuwirira uye kunhuhwirira kwakasiiwa nemazimbe. Uye zvakare, inogara ichiunza yakawanda mavara kune iyo grill. Iko kushandiswa kwemiriwo iyi kwakajairika: hanyanisi, girini uye tsvuku mhiripiri, madomasi, aubergines kana zucchini.
Howa hunogona zvakare kuve hwakakwana pakukora. Iwe unofanirwa kuzvicheka kuita zvidimbu kuti uzviise mumatanda akareba kana matanda esimbi kuitira kuti iwe ugone kuunganidza iwo skewers kune zvaunofarira. Kana ivo vari kubika, iwe unogona kuwedzera mamwe anonhuwirira miriwo nemafuta kuti it inakidze zvirinani.
Kana iwe uchida kuwedzera huwandu hweprotein kune aya skewers iwe unogona Wedzera macube e hard tofu. Ichi chigadzirwa, chinova chinobva musoya, chakashanda kuwedzera chiyero cheprotein kune vanhu vazhinji vanosarudza kuve vezvinomera kana vegan.
Kunge tofu, unogona kugadzira seitan fillets, chikafu chinova chibereko chegorosi guten rakawanikwa nekukanya furawa uye wozoigeza kuti utore starch. Uye zvakare, inopa katatu zvakapetwa kupfuura nyama, ingangoita 75%.
Kuti uite seitan mafillets iwe unogona kutevera iyi diki nzira.
1 chikamu chickpea furawa.
2-3 zvikamu zveupfu hwegorosi.
1 chikamu breadcrumbs kana cornstarch.
Sakanidza nemvura, muto muto, uye soy muto.
Aya mafirita anogona kurungwa nezvinonhuwira, iwe unozvigadzira uye iwe woenda nazvo kune iyo grill. Saka yako seitan ichave ine muto kwazvo, yakasununguka uye nezwi rinonakidza kwazvo.
Iwe unogona kukurudzirwa kugadzirira yakakora miriwo kune yako yemidziyo bhengi. Unogona kushandisa zucchini kana madomasi, semuenzaniso. Unogona kuvazadza nesipinashi kana chard cream, uye iwe unogona kuwedzera tofu kuti uwedzere kudya kwayo kweprotein.
Mazai uye howa Vanogona zvakare kuzadzwa uye vakakwana pane bhengi. Kana iwe uri lacto-yemiriwo unogona kushandisa chizi kuti iite juicier.
MaBurger anowanzova mambokadzi emabharuki uye mune ino kesi, vanogona kuva futi. Vegetarian burger inogadzirwa kubva kuzviyo uye nyemba. Iwo akasanganiswa nemuriwo, ingava sipinashi kana karoti semuenzaniso. Izvi zvinovapa iyo yakasarudzika mameseji uye kuravira.
Chickpeas kana nyemba dzinogona kushandiswa semarume, mukuwedzera, vanogona kugadzirirwa sekunge yaive falafel yakakangwa. Mbesa dzinogona kuperekedzwa ne chives, gariki, parsley, mhiripiri uye munyu.
Kana usiri fan of nyemba, unogona zvakare kugadzira hamburger zvichibva mupunga, pizi kana neoats. Shandisa zviyo zvese zvaunoda, ita tsvagiridzo yako uye unakirwe mukicheni.
Kunyangwe isiri kutariswa, chibage chakabikwa pachihwande chakakwana kuita grill pane bhengi. Chibage chine hukuru hwakakura hwekudya, uye imwe yedzakanakisa nzira dzekuitora iri pabhengi.
Chibage chinogara chichiperekedza chinyoro chakanaka chevheji. Iwe unogona kukwiza mhungu yose nemafuta usati waiputira pane aluminium pepi. Zviise pane grill, ishandure kwemaminitsi gumi nemashanu kuitira kuti zviitwe zvakanaka kwese kwese.
Iwe unogona kugadzira parutivi saladhi iyo iri pakati peyese kutarisisa, ne madomasi, lettuce, endives, magaka, nemuriwo wese waunoda.
Romaine lettuce yakakosha kugadzira saradhi yakanaka, moyo wakapfava uye mutsva. Zvakare, kana iwe ukaperekedza saladhi ine yakanaka kupfeka, iwe unenge uine yakakwana saladhi. Isa mafuta akanaka, bharisamu vhiniga, munyu, mhiripiri nezvimwe zvinonhuwira.
EIzvo zvakakosha kuti iwe uyedze nguva yekubika yeiyi inodziya saradhi, sezvo vasingakwanise kuva refu pane bvunzi, semuenzaniso, cucumber inogona kuve miniti imwe, asi endive maminetsi maviri, kana iwe ukapedza nguva, kupisa kuchapfavisa miriwo zvakanyanya.
Chekupedzisira, iwe unogona kubheja pane yekuzvigadzirira yogati muto iyo inobvumidza iwe kuti ubate yakakosha kubata kune ako miriwo uye iwo haana kudaro bland. Yogati inobvumira sarudzo zhinji, inogona kusanganiswa negariki uye cucumber kugadzira iyo tzaiziki yechinyakare, unogona zvakare kuperekedza iyo yogati ne soy muto kuti ubate zvakasiyana.
Iwe unogona zvakare kusanganisa iyo yogati, nematomatisi akachekwa, hanyanisi uye korianderi, saka iwe unozowana rakapfuma reIndia-dhomati raita raita. Idzo sarudzo dzakasarudzika kuitira kuti iwe ugone kuperekedza miriwo uye hamburger iyo iwe yawakagadzirira kare.
Usatarisira pasi ma veggies pane bhengi
Sezvawaona, kune dzimwe nzira dzakawanda dzaunogona kugadzira mune barbecue yemiriwo, nekuti isu tese tinofunga nezve nyama uye hapana chimwe chinopfuura nyama. Asi miriwo, hamburger, skewer kana masaladi anogona kungofanana nechidimbu chenyama.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Utano » Dzimwe nzira dzekugadzira bhengi yemuriwo